Waddooyin Ku Yaalla Dhuusamareeb Oo Markii Ugu Horeysay Lagu Xiray Dhagxaan & Carro
September 10, 2019 NEWS 0
Wararka laga helayo Magaalada Dhuusamareeb ee Caasimadda dowlad Goboleedka Galmudug ayaa waxaa ay sheegayaan in Wadooyinka muhiimka ah ee halkaas ku yaalla Maanta lagu arkay dhagxaan iyo Carro tuur badan.
Ciidamo ka tirsan kuwii dhawaan dowladda Federaalka Soomaaliya geysay Dhuusamareeb ayaa la sheegay in dhagxaan iyo Carro ay ku xireen Waddooyinka waaweyn ee muhiimka ah ee ku yaalla Magaalada.
Ilo wareedyo ayaa tilmaamaya in Wadooyinka sida gaarka ah dhagxaanta Ciidamada ugu xireen ay qeyb ka tahay Xarunta uu ka socdo Shirka dib u heshiisiinta Galmudug iyo Madaxtooyada Maamulka iyo wadooyinka muhiim ah oo ay isticmaalaan Madaxda dowladda.
Sidoo kale Waddooyinka Ciidanka ay xireen ayaa waxaa kamid ah Waddo ay inta badan ku caweeyaan dadka shacabka ah ee ku nool Magaalada Dhuusamareeb.
Sababta loo dhigay Dhagaxaan iyo Caro turka ayaa waxaa lagu sheegay in ay tahay si loo adkeeyo amaaanka dhuusamareeb,waxaana loo diidayaa in halkaas ay maraan gaadiidka noocyadiisa kala duwan.
Waa markii ugu horeysay oo dhagaxaan iyo carro tuur lagu sameeyay magaalada Dhuusamareeb ee Caasimadda dowlad Goboleedka Galgaduud tan iyo markii ay dowladda Soomaaliya la wareegtay amnigga Magaaladaasi.
Dhinaca kale Arrintaan ayaa waxaa walaac xoogan ka muujiyay dadka shacabka ah ee halkaas kunool,isla markaana waxaa ay sheegeen in aysan hore u arg arrin noocaan oo kale ah.
DAAWO:Puntland oo ku dhawaaqday arin aanan laga filayn & Xukuumadda Denni oo shaacisay in ay…..
DHAGAYSO:War cusub oo kasoo kordhay deegaanadii la isku laayey ee G. Mudug
Madaxweyne Denni oo arin aan la filayn kasoo saaray Doorashada Somalia
DAAWO VIDEO SIR:Muuse Biixi oo Midnimada Soomaliya Doonaya lakiin Shacabkiisaa Si uu Ugu Sheego Garan waayey
XOG:Farmaajo oo helay qorshihii uu kusoo laaban lahaa
Shir laga yeeshay fatahaada Wabiga Shabelle
Dagaal u dhaxeeya Ciidamada Dowladda & Al-shabaab oo dhacay
Khasaare ka dhashay dab ka kacay Hargeysa
DAAWO:Madaxweyne ku xigeenka Somaliland oo Borama ka daah furay mashaariic kala duwan